काठमाडौं । साझा यातायतमा कार्यरत कर्मचारीलाई लकडाउन शुरू भएको करीब तीन महीनापछि मात्रै बेतलवी विदाको सूचना दिइएको छ । चैत महीनादेखि रोकिएको पारिश्रमिक पाउने आशामा बसेका सयौं कर्मचारी केही दिनअघिको यस्तो सूचनाबाट घर न घाटको भएका छन् ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट जोगिन चैत ११ गतेदेखि खजारी भएको लकडाउनका कारण साझाका सबै बस थन्किएका थिए । त्यसयता पारिश्रमिकको आशामा बसेका सयौं चालक तथा सहचालकको पारिश्रमिक आउनु त कता हो कता उल्टै रोजगारी नै खोसिएको छ ! त्यो पनि सेवा तथा पारिश्रमिक रोकिएको करीब तीन महीनापछि ।
लकडाउन शुरू भएको करीब तीन महीनापछि आउटसोर्सिङबाट काम गरिरहेका करीब २०० जना चालक तथा सहचालको चैत महीनाको आधारभूत पारिश्रमिक गत बुधवार बैंक खातामा जम्मा गरेको साझाले पारिश्रमिकसँगै बेतलवी विदाको सूचना पनि पठाएको हो । पारिश्रमिक आउने तथा अब क्रमिक रूपमा लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा पुनः रोजगारी सञ्चालनको आशामा बसेका आफूहरूमाथि साझा यातायातजस्तो संस्थाले घात गरेको एक चालकको भनाइ छ ।
‘हामी आउटसोर्सिङका भए पनि संगठित रूपमा काम गर्ने मजदूर हौं । काम हुञ्जेल भाँडो काम सकिएपछि ठाँडोको व्यवहार भएको छ’, ती चालकले भने, ‘हाम्रो अधिकार जसरी पनि लिएर छाड्छौं । हाम्रो श्रम र शीपको साझा यातायातजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले ठूलो अवमूल्यन गरेको छ, यसको मूल्य साझालाई महँगो पर्नसक्छ ।’ साझाका आन्तरिक कर्मचारीलाई घरघरमै पुगेर पारिश्रमिक वितरण गरेको तर जोखिम मोलेर काम गर्ने मजदूरलाई भने पारिश्रमिक नदिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
साझालाई करीब २०० जना चालक तथा सहचालक आपूर्ति गर्ने नवदुर्गा सेक्युरेटी सर्भिसका सञ्चालक विनोद दाहाल भने साझासँग चैत महीनाको पारिश्रमिक लिएर वितरण गरिसकिएको बताउँछन् । साझासँग उक्त पारिश्रमिक लिन निक्कै सकसपूर्ण वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार साझाले भत्ताबाहेक न्यूनतम पारिश्रमिक रू. १३ हजार ४५० मात्रै उपलब्ध गराएको छ । यो पारिश्रमिक कम्पनीले यसै सातामात्रै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाएको हो । सँगसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बेतलवी विदामा बस्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
विद्यामान संकटको बेलामा आफूले सप्लाइ गरेको श्रमिककाप्रति कुनै जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै नवदुर्गाका सञ्चालक दाहालले भने, ‘साझाले समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएपछि हामीले यो बीचमा राहतस्वरूप अवस्था हेरेर रू. ५ हजारदेखि रू. १० हजारसम्म नगद वितरण गरेका छौं । साझामा कार्यरत उनीहरूमध्ये सेक्युरेटीका रूपमा काम गर्न चाहाने र ठाउँ पाएसम्म केहीलाई हामीले अन्यत्र रोजगारीको पनि व्यवस्था गर्न थालेका छौं ।’ अब साझाले ती कर्मचारीलाई पुनः काममा फर्काउने अवस्था निकै न्यून रहेको संकेत उनले गरेका छन् ।
कम्पनीले रू. १३ हजार ४५० का दरले खातामा पैसा पठाएको भने पनि आफूहरूको खातामा रू. १२ हजार ४७१ मात्रै प्राप्त भएको अर्का एक चालकले बताए । त्यसमाथि पनि कसैलाइ कति कसैलाई कति गरेर पारिश्रमिक वितरण गरेको उनको भनाइ छ । त्यो पनि आफूहरूको पटक पटकको खबरदारीपछि मात्रै सम्भव भएको र तलब आज हाल्ने, भोलि हाल्ने भन्दै लामो समयदेखि झुलाएर राखेको गुनासो उनीहरूको छ ।
साझासँग मिलेर नवदुर्गा सेक्युरेटीले आफूहरूमाथि श्रमशोषण गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् । साझा यातायातले पारिश्रमिकको बारेमा यति घृणित काम गर्छ भन्ने विश्वास आफूहरूलाई नभएको उनीहरूको बुझाई छ । ‘साझा र नवदुर्गाबीचको सम्झौता केही महीना अघिदेखि नै सकिएको छ’, एक मजदुरले भने, ‘लिने र दिनेबीचको सम्झौता सकिँदा हामी समस्यामा परेका हौं कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ ।’ पारिश्रमिकमा भएको घृणित जालझेललाई हेर्दा कर्मचारी आपूर्तिको अर्को प्रक्रिया शुरू गरेको साझाले प्रक्रिया निस्कर्षमा नपुगुञ्जेल मात्रै आफूहरूलाई प्रयोग गरेको हो कि भन्ने आशंकाले पनि उनीहरूको मनमा डेरा जमाएको छ ।
विश्वव्यापी महामारीले नेपालसमेत प्रभावित बनाएको अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक दिँदैनदिने भन्ने प्रश्न आउँदैन । साझा यातायातका बोर्ड सदस्य महेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हाम्रो बोर्ड बैठक बसेको छैन । त्यसकारण यसबारेमा के भइरहेको छ मलाई जानकारी हुँदैन ।’ यसबारे केही निर्णय प्रशासनले गरेको हुनुपर्छ । अन्यथा त्यस्तो नभएको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यस्तै ढिलै भएपनि चैत महीनाको पारिश्रमिक पठाएको बताउँछन् साझा यातायातका लेखापाल सुनील महर्जन । उनले कसको कति पारिश्रमिक पठाइएको छ भन्ने प्रश्नमा सबैको सबै पारिश्रमिक पठाइएको जवाफ दिए । चैत महीनाको पारिश्रमिक दिए पनि वैशाख र जेठबारे भने छलफल भइरहेको उनले बताईरहँदा श्रमिकका मोबाइलमा बेतलवी विदाको सूचनाले घन्टी बजाएको छ ।
साझा यातायातमा आन्तरिक तर्फ कार्यालय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पदमा २४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने ९० जना चालक, ८९ जना सहचालक, २ जना सुरक्षा गार्ड र सरसफाइ तथा अन्य कामका लागि २० जना कर्मचारी आउटसोर्सिङबाट कार्यरत छन् ।